အသကျ (၁၀၀) ရှိပမေဲ့ ရှာလယျလမျးမကွီးကို တဈဦးတညျး ခြုံမွတျရှငျးပေးခဲ့ဖူးတဲ့ အာဂအဘှား – Youth Bar
အသကျ (၁၀၀) ရှိပမေဲ့ ရှာလယျလမျးမကွီးကို တဈဦးတညျး ခြုံမွတျရှငျးပေးခဲ့ဖူးတဲ့ အာဂအဘှား
အဘှားက စဈကိုငျးတိုငျး၊ အငျးတျောမွို့၊ မဲဇာစံပွကြေးရှာအနီးက ပါအော့ရှာမှာ နသေူပါ…နာမညျကတော့ ဒျေါလှညိုလို့ ချေါပါတယျ…..အသကျကတော့ ၁၀၀ ရှိပါပွီ….သူ့အသကျအရှယျနဲ့ လမျးတောငျကောငျးကောငျးမလြှောကျနိုငျရှာပါဘူး အဘှားက…
ဒါပမေဲ့ လူငယျလူရှယျတှေ မမွငျမတှကြေ့ျောသှားတဲ့ ပရဟိတအလုပျကို သူလုပျပွခဲ့ပါတယျ…အဲတာကတော့ ရှာလယျလမျးမကွီးမှာ ထူထပျအောငျပေါကျနတေဲ့ မွကျတှကေို လမျးမလြှောကျနိုငျလို့ ထိုငျရကျနဲ့ပဲ တူရှငျးတခြောငျးကိုငျပွီး ရှငျးပေးခဲ့တာပါ…
အလှနျရှညျတဲ့ ရှာလယျလမျးမကွီးကို ထိုငျရငျးတရှရှေ့နေဲ့ မွကျတှရှေငျးလာတာ လမျးမတဈခုလုံး ပွောငျသလငျးခါသှားပါတော့တယျ…. ဒီ အသကျအရှယျနဲ့ နားနားနနေမေနဘေဲ ပရဟိတလုပျတဲ့ အဘှားရဲ့ စိတျဓာတျကတော့ အလှနျခြီးကြူးလေးစားစရာကောငျးသလို လူငယျတှအေတှကျလညျး အတုယူရမဲ့ စိတျဓာတျပဲဖွဈပါတယျ….
အဘှားတဈယောကျ ရှာလယျလမျးမတဈလြှောကျမွကျရှငျးရငျ ကုသိုလျယူတဲ့ပုံလေးကို ပရိသတျကွီးတို့အတှကျ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျ….
အသက် (၁၀၀) ရှိပေမဲ့ ရွာလယ်လမ်းမကြီးကို တစ်ဦးတည်း ချုံမြတ်ရှင်းပေးခဲ့ဖူးတဲ့ အာဂအဘွား
အများအကျိုးအတွက် ငယ်သည်ကြီးသည်မဟူ စိတ်ကောင်းထားပြီး လူတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အသက် ၁၀၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းက အဘွားတစ်ယောက်က သက်သေပြခဲ့ပါတယ်…
အဘွားက စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ အင်းတော်မြို့၊ မဲဇာစံပြကျေးရွာအနီးက ပါအော့ရွာမှာ နေသူပါ…နာမည်ကတော့ ဒေါ်လှညိုလို့ ခေါ်ပါတယ်…..အသက်ကတော့ ၁၀၀ ရှိပါပြီ….သူ့အသက်အရွယ်နဲ့ လမ်းတောင်ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်ရှာပါဘူး အဘွားက…
ဒါပေမဲ့ လူငယ်လူရွယ်တွေ မမြင်မတွေ့ကျော်သွားတဲ့ ပရဟိတအလုပ်ကို သူလုပ်ပြခဲ့ပါတယ်…အဲတာကတော့ ရွာလယ်လမ်းမကြီးမှာ ထူထပ်အောင်ပေါက်နေတဲ့ မြက်တွေကို လမ်းမလျှောက်နိုင်လို့ ထိုင်ရက်နဲ့ပဲ တူရွင်းတချောင်းကိုင်ပြီး ရှင်းပေးခဲ့တာပါ…
အလွန်ရှည်တဲ့ ရွာလယ်လမ်းမကြီးကို ထိုင်ရင်းတရွေ့ရွေ့နဲ့ မြက်တွေရှင်းလာတာ လမ်းမတစ်ခုလုံး ပြောင်သလင်းခါသွားပါတော့တယ်…. ဒီ အသက်အရွယ်နဲ့ နားနားနေနေမနေဘဲ ပရဟိတလုပ်တဲ့ အဘွားရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကတော့ အလွန်ချီးကျူးလေးစားစရာကောင်းသလို လူငယ်တွေအတွက်လည်း အတုယူရမဲ့ စိတ်ဓာတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်….
အဘွားတစ်ယောက် ရွာလယ်လမ်းမတစ်လျှောက်မြက်ရှင်းရင် ကုသိုလ်ယူတဲ့ပုံလေးကို ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်….